I-Methyl Cellulose Yenyama esekwe ezitshalweni - ISky Honest Chem. Co, Ltd
Iyini inyama esekwe ezitshalweni? Inyama esekwe ezitshalweni inyama eyenziwe ezitshalweni. Yakhelwe ngokukhethekile futhi yenzelwe ukubukeka, ukunambitha okunje, futhi ukupheka njengenyama yanyama. Inyama esekwe ezitshalweni ingaba ngesimo se-burger patty, nugget, noma ivele idilike futhi amasoseji futhi njengoba ikhula idumile, lezi ezinye izindlela ezenziwe nge-veggie zishukumisa imboni yezinyama nakho konke ebesicabanga ukuthi sazi ngama-veggie burger. Kuqhathaniswa nemikhiqizo yenyama, inyama esekwe ezitshalweni - ingxenye enkulu - inikela abathengi umugqa ozinzile futhi onemvelo wokuhlala wezindlela zokwenyama.
I-Methyl Cellulose iyiphunga futhi ayinadoti, imhlophe qhwa, mhlophe, i-fibrous noma i-granular, i-powder egeleza mahhala eyenziwe eyenziwe nge-polymer cellulose yemvelo. Idala ukwakheka okuhle kanye nokuluma okuphelele okufudumele kwenyama eyenziwe ngeSitshalo njengama-vegan burger, amasoseji e-vegan, njll. Inikeza ukubopha futhi kusiza ukwakheka ukubamba ukwakheka emazingeni okushisa abandayo. Iqinisa amanoni namanzi ukugcina umswakama kumkhiqizo ophelile. Kungukuzikhethela kwamafutha ngamanzi.
Uma udinga isampula yamahhala sicela ukhululeke ukuxhumana nathi info@honestsh.com.
* ECAPTCHA: Sicela ukhethe iloli
Isikhathi sokuthumela: Aug-06-2020